खुसीको खवर ! अव चिन्ता नलिनुहोस् ,यस्तो छ : रक्सी छोडाउने औषधि र उपचार
डिसेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment उपचार, औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा, रक्सी
रक्सी छोडाउने औषधि र उपचार ! रक्सीको कुलतबाट कसरी समाजलाई बचाउने भन्ने विषयमा गहन अध्ययनको खाँचो छ । रक्सी चुरोट बिडी उत्पादन हुन्छ तर खाने व्यक्ति नभए बन्द हुन्छ यो सामान्य कुरा हो तर खाएर स्वास्थ्य खराब हुने जुनसुकै बस्तुलाई राम्रो मानिदैन ।
आज हामीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति नजर-अन्दाज गर्दै यस्ता बस्तुको सेवन गर्छौं । हरेक बस्तुप्रति सजग रहनुपर्छ जसको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्दछ ।
रक्सीको सेवन भने मानवजाति जति नै पौराणिक छ । कार्बोहाइड्रेटयूक्त खाद्यपदार्थ कुहिएपछि प्राकृतिक रुपमा अल्कोहोल, अर्थात मदिरामा हुने मुख्य मादक पदार्थ बन्छ । कुनै समाज यसको प्रयोगप्रति निकै उद्धार छ भने कुनै निकै सख्त र कहिलेकाही पूर्ण निषेधित छन् ।
आज यो लेखमा मैले रक्सी छोडाउन होम्योपैथीक औषधिबारे जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु । कुनैपनि कुलत छोडाउन मानिसले संकल्प गर्न र यो लतले उसको जीवनमा गरेको नकरात्मक प्रभावलाई समझेर आफै छोड्न सक्छ भने ठूलो उपलब्धि समझनुपर्दछ ।
रक्सी छोडाउने उपचार
सल्फर-२०० सामान्यका लागि र अत्यधिक रक्सी खानेहरुको लागि – सल्फर-१००० किनेर ल्याउने । बिहान उठ्ने बित्तिकै यसको एक थोपा जिब्रोमा चुहाई दिनुपर्छ र एक घण्टाअघि र पछीसम्म केहि नखाने । यस्तो ५/६ दिनसम्म लगातार गर्ने र त्यसपछि सप्ताहमा २/३ पटक गर्दै तीन महिनासम्म जारी राख्नुपर्छ । यसबाट जस्तोसुकै रक्स्याहाको पनि लत छुट्छ ।
← शरीरको यी ६ अंगहरु ठूला हुने महिलाहरु हुन्छन् भाग्यमानी
गर्दन दुख्दा गर्नुपर्ने व्यायामहरु →
डिसेम्बर 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
सेप्टेम्बर 25, 2019 सेप्टेम्बर 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
One thought on “रक्सी छोडाउने औषधि र उपचार”